Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo casho sharaf u sameeyay ergadii ka qeyb-gashay shirweyihii lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Madaxweyne Xassan Sheekh oo casho sharaf u sameeyay ergadii ka qeyb-gashay shirweyihii lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Posted On 07 Sep 2013
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa habeenimadii xalay casho sharaf ugu sameeyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ergadii ka qeyb-gashay shirweyihii Qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Xaflada oo aheyd mid siweyn loo soo agaasimay ayaa waxaa goob joog ka ahaa oo ka soo qeyb-gallay kuna wehlinayay madaxweynaha marwadiisa Qamar Ali Omar, Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Ra’iisul Wasaare Ku xigeen iyo wasiirka Arrimaha Dibedda Marwo Fowzia Yusuf Haji Adam, Wasiiro, xildhibaano, Guddoomiyaha Gobolka Banadir ahna Duqa Magaalada iyo marti sharaf kale.
Munaasabada casho sharafta ayaa xubnihii ka hadllay waxaa ka mid ahaa ku-simaha ra’iisal wasaaraha ahna wasiirrka arrimaha dibada iyo iskaashiga caalamiga ah murwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan, wasiir ku-xigeenka wasaarrada warfaafinta C/shakuur Cali Mire iyo waliba xubin shareef oo loo gartay Caasho Geelle.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo dhinaciisa ka hadllay munaasabada casho sharafta xalay lagu sameeyay xarunta madaxtooyada ayaa uga mahad celiyay ergada ka qeyb-gashay shirweynaha Qaran waqtigooda ay ku bixiyeen shirkah, isla markaana ka codsaday inay Dowladda la shaqeeyaan isla markaana ballanqaaday talo soo jeedintii shirka siyaasadda inay dowladdu dhaqangelin doono.
Sidoo kale madaxweynaha ka hadlay warbixintii ay hay’ado caalami ah oo ku takhasusay arrimaha baaritaanka musuqmaasuqa iyo garyaqaano caalami ah oo ay sheegeen in eedeymihii Guddiga dabagalka ee QM ay ahaayeen kuwo aan sal iyo baar toona laheyn.
Waxaa uu sheegay ugu danbeytii sababta ay dowladda uga codsatay hay’addacaalamiga ah in ay baaraan in musuqmaasuq dalka ka jiro ay aheyd in haddii la helo cid musuq-maasuq ku kacday tallaabo laga qaado.
”Waxaana aan ku faraxsanahay in baaritiinkii uu soo gabogaboobay isla markaana la ammaanay shaqaaalaha Bankiga dhexe iyo maaliyadda sida ay u shaqeeyaan iyo in dhammaan eedeymihii musuqmaasaqa ay wada ahaayeen kuwa aan waxba ka jirin,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
War deg deg ah : Qaraxyo ismiidaamin ah oo goor dhaw lagu weeraray maqaayada The Village ee magaalada Muqdisho
Dowladda Itoobiya oo sheegtay in ay dhax-dhaxaadineyso dowladda federaalka iyo maamul gobolleedka Puntland